Chizvarwa chechitatu cheMicrosoft Band chaida kukwikwidza neApple Watch munzvimbo yemumvura | Ndinobva mac
Chizvarwa chechitatu cheMicrosoft Band chaida kukwikwidza neApple Watch munzvimbo yemumvura
Chimwe chezvinhu zvitsva zve Apple Kuona Akateedzana 1 uye Apple Kuona Akateedzana 2 ndiko kuramba kwemvura uye mukana wekunyudza, saka inogona kushandiswa kuongorora zviitwa zvekushambira. Nekudaro, imwe nguva mushure mekunge Apple yatanga Apple Watch yayo nyowani, takadzidza kuti Microsoft yanga ichiedzawo mhando iyi yekutarisa yeiyo Microsoft Band 3
Kana iwe usiri kuziva iyo Microsoft BandTinogona kukuudza kuti kambani yeRedmond yakashambadza mamodheru maviri ekupfeka, zvishongo zvine skrini yakakombama iyo yakaongorora kuita kwedu muviri.
Nekudaro, zvinoita sekunge zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kuMicrosoft nechigadzirwa ichi icho chinofungidzirwa kuti Microsoft Band 3 haisi kuzotengeswa mukuwedzera kune mamwe mamodheru akamiswa, ndokuti, iyo Microsoft inosiya nyika yerudzi urwu rwekupfeka.
Nhasi kwave kuburitswa pamambure enetiweki ayo Microsoft anga achiyedzawo ayo Microsoft Band mumitambo yemvura uye ndeyekuti mifananidzo yechinhu ichocho yakaonekwa umo isu tingaone sarudzo iripo pachiratidziri chayo.
Zvisinei, hazvizivikanwe zvechokwadi kana chokwadi chekuti Apple yaive pamberi paRedmond mune chikamu che kuongorora maitiro mukati memvura Izvo ndizvo zvave zvakakonzera iyi nyowani yeMicrosoft modhi kuti isaone mwenje kana kwete.
Izvo zviri pachena ndezvekuti Apple Watch ichiri iyo inotengesa zvakanyanya smartwatch uye ndizvo izvo Apple Watch ndeyeApple Watch. Isu tatoziva kuti zvinogona kuve zvirinani, asi pane nguva yekuvandudza uye zvirokwazvo mumakore mashoma apo isu tichirangarira yekutanga Apple Watch, zvakafanana zvichaitika kwatiri sezvinoitika kwatiri izvozvi kana tichienzanisa 2006 Mac neiyo nyowani 12-inch MacBook.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chizvarwa chechitatu cheMicrosoft Band chaida kukwikwidza neApple Watch munzvimbo yemumvura
Iyo inotevera Mashiripiti Khibhodi inogona kuunza iyo dhizaini yemakiyi neelectric ink